Fabrizio Romano oo shaaca ka qaaday xaqiiqada ah in Paul Pogba uu ka tagayo Manchester United – Gool FM
(Manchester) 24 Dis 2021. Suxufiga dhanka suuqa kala iibsiga lagu qaddariyo ee Fabrizio Romano ayaa shaaca ka qaaday xaqiiqada ah in xiddiga reer France ee Paul Pogba uu ka tagayo kooxdiisa Manchester United inta lagu jiro suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee xagaaga.
Qandaraaska Paul Pogba ee Manchester United ayaa dhacaya xagaaga soo aadan, ilaa iyo haatan ciyaaryahanku ma cusbooneysiin qandaraaskiisa kooxda.
Waxaa maalmihii la soo dhaafay jiray warar ku aadan in maamulka Manchester United ay doonayaan inay iibiyaan Paul Pogba inta lagu guda jiro suuqa bisha Janaayo ee soo aadan, maadaama ay jirto cabsi laga qabo in ciyaaryahanka uu kaga dhaqaaqo beeca xurta ah suuqa xagaaga.
Fabrizio Romano ayaa ku sharxay boggiisa rasmiga ah baraha bulshada ee “Twitter” in Manchester United aysan wax wadahadal ah la gali doonin koox kale si ay u iibiso Paul Pogba bisha Janaayo.
Suxufigan dhanka suuqa kala iibsiga lagu qaddariyo ayaa wuxuu hadalkiisa intaas ku daray in aysan jirin wax dalab ah oo laga soo gudbiyay Paul Pogba, ama heshiis lala galay koox kale, maadaama dalabka qandaraas kordhinta uu miiska saaran yahay tan iyo bishii July ee la soo dhaafay.
Fabrizio Romano ayaa intaa ku daray in xiddiga reer France ee Paul Pogba uusan wali wax go’aan ah ka qaadan mustaqbalkiisa, Manchester United-na ay weli sugeyso.